DOORASHADA NOOCYADA SAXDA AH EE QAJAARKA EE SII KORDHAYA ON BALAKOONKA - BEER CAGAARAN
Soo dhawow noocyada ugu wanaagsan ee qajaarka ee balakoonka
Waxaad dhigi kartaa dhadhan qaali ah oo guriga lagu dhajiyo xitaa haddii hantida uusan lahayn dhul beereed, ama dacha. Xaaladdan oo kale, badbaadada keliya ayaa noqon doonta noocyo of qajaarka ee balakoonka, sharaxaadda ugu caansan ee aan samayn doono xiga.
Kala duwan Tani waa Bisaylkiisa hore, taas oo ka dhigaysa suurtagal ah in la arko on duurka ee dhirta this ugxan-ugxan ee hore ee miraha gudahood 1.5 bilood ka dib soo baxa caleemaha. Sidaa darteed, waxaa suurtogal ah in la goosan karo qajaarka April ee laba bilood ka dib beeridda abuurka. Sida dhammaan bacriminta qajaar ku habboon beerista balakoonka magaalooyinka, kala duwan tani waa parthenocarpic. Waxay ku saabsan tahay kartida ay u sameysan karto miraha iyada oo aan loo jajabin, maadaama kaliya ubaxyo dheddig ah oo badanaa lagu aasaasay dhirta.
Tani waxay ka dhigan tahay in qajaarka aan iskood u dhicin, laakiin aan la pollinated at dhan, taas oo ah sababta abuurka ma sameeyaan miro baaluq ah. Waxaa haboon in la ogaado in foomka hybrid ee kala duwan ee qajaar April ay si guul leh u dhali kartaa miro xitaa markii ay ku koray gudaha.
Waxaa ka mid ah sifooyinka ugu caansan ee noocyada kala duwan waa in la muujiyaa:
Kala duwanaanta bisha Abriil waa qajaarka la yareeyey, oo leh dherer korne ah oo aan ka badnayn 25 cm.
Dalagga dalagga waxaa loo sameeyaa si isku mid ah hal bil gudaheed.
Miraha waxay leeyihiin qaab cylindrical ah, dusha sare ee lugaha leh cadcad yar oo caddaan ah.
Miisaanka qajaarka u kordhay 200 ilaa 250 g.
Jidhku waa jilicsan yahay dhadhankiisa, isagoo aan qadhaadh lahayn.
Bisha Abriil waxay u adkaysataa cayayaanka iyo cudurada.
Waxaa jira u nugul inuu koro Zelentsy, taas oo keenta huruud.
Iyadoo daryeel habboon, dhalidda ee kala duwan April ka 1 sq. m ayaa gaari kara 13 kg.
Iyada oo joogitaanka pollinators iyo beeritaanka hore, dhalidda ee kala duwan ku tilmaamay kordhin by 25-30%.
Waa muhiim! Marka aad iibsanayso noocyada qajaarka cagaarshowga, waa in aad tixgelisaa xaqiiqda ah in qajaarka noocaan oo kale uusan soo saarin abuurka. Sidaa darteed, abuurka beerto ay tahay inay iibsadaan sanad walba.
Sariiraha qajaarka ee balakoonka kala duwan ee Balagan ayaa sidoo kale uqalmaa dareen gaar ah, tan iyo tan kala duwan oo qajaarka qajaar. Nooc ubax ah oo inta badan haween ah, waxay midho dhali kartaa oo aan lahayn pollination. Buundada foomka aad u yar, oo leh caleemaha dhinaca gaaban, taas oo ku haboon in lagu koro meelaha adag. Si kastaba ha ahaatee, tani ma joojinayso dhirta inay ka sameysanto meel kasta 3 ilaa 6 ugxan.
Khudradda cagaaran ee Balagan way ku kala duwan tahay qaabka muraayadda-qaabka-qaababka, dusha sare ayaa lagu daboolay tubercles. Midabku waa cagaar xoog leh, laakiin waxaa kale oo jira xargaha iftiinka dheer. Dhererka caleenta wuxuu ku kala duwanaan karaa inta u dhexeysa 8-10 cm, miisaanka dhifkuna wuxuu ka badan yahay 90 g. Faa'iidada ugu weyn ee miraayada Balagan waa dhadhankiisa sare, jidhka cufan iyo qallalan, ku haboonaanta qaadista.
Marka koraan qajaar kala duwan ee Balagan ee balakoonka, waxay iska caabbiyaan miro yaryar, maqaarka saytuunka iyo wax xagta oo budada ah. Xanuunka kaliya ee leh xanaan khaldan ayaa saameyn kara duurka qajaarkan waa xagta uumiga budada ah.
Cucumber F1 Balcony waa midka ugu fudud ee lagu beerayo iyo daryeelka, maadaama noocyada kala duwan loo abuuray gaar ahaan koritaanka balakoonka. Dalladaha ayaa lagu gartaa heer dhexdhexaad ah oo laamo ah, iyo sidoo kale tiro badan oo ugxan (2 illaa 8), kuwaas oo laga sameeyay meel kasta. Tilmaamo kale oo ka mid ah kala duwan ee qajaarka Balcony waa buuxsamay buuxa ee ugxan, sababtoo ah taas oo ah Bisaylkiisa caleemo cagaaran waxay u dhacdaa si aan qummaneyn waxayna socon kartaa dhowr toddobaad.
Caleenta caanaha ah ayaa waxay ku kala duwan yihiin dusha buluuga ah oo leh caddaan cad, qaabka oval-cylindrical. Waxaa lagu gartaa qanjirka daciifka ah. Dhererka miro kasta waa 6-10 cm, iyo dayactirka muddada-dheer ee baadiyaha, waxay awood u leeyihiin in ay sii wadaan cabbirkan muddo dheer, iyada oo aan ka soo kaban oo aan noqonin huruud. Darajada waa la qiimeeyaa iyo dhadhankiisa, iyo sidoo kale ku habboon salting.
Fruiting on duurka u bilaabmaa qiyaastii 40-41aad tan iyo caleemaha ugu horeysay u muuqday. Intaa waxaa dheer, haddii aad la yaaban tahay marka la beerayo qajaarka ee balakoonka, ka dib marka noocyo kala duwan waxaa lagu beeray karaa dhamaadka March, maadaama ay tahay qabow u adkaysta ku filan. Cudurada caamka ah ee qajaarka ayaa si aan macquul ahayn saameyn ugu yeelan, inkasta oo ay dhif tahay inay muuqato muuqaalka wax-qabad ee caarada.
Qajaar ee magaalada
Kala duwanaansho kale oo ka mid ah kaabayaasha xirmooyinka. Noocyada Bushes Qaybta qajaarka magaalada qadiimka ah oo aad u wanaagsan, waxay ahaataa waqti hore oo ay u muuqdaan ugxan-ta hore - oo ku saabsan maalinta 41aad ee koritaanka. Mar kasta oo isku mar ah isla markaas waxay sameeyaan 3-9 ama ka badan ugxan.
Iyada oo ay sabab u tahay koritaanka ugxan-yaryaha, cagaarka yar-yar, caga-bararka ayaa la sameeyaa dhexroor ilaa 2.7 cm iyo dherer ilaa 12 cm. Cabbirka qajaar kasta oo aan ka badnayn 90 g. Waxa kale oo lagu gartaa jiritaanka muddada dheer iyo kartida muddo dheer si ay u ilaaliyaan xajmigooda inta ay ku harayaan baadiyaha. Sababtoo ah qaabkan iyo qaabka khafiifka ah, mirahaas waxaa lagu magacaabaa "qajaarka farta".
Laakiin faa'iidada ugu weyn ee kala duwan ee noocyada kala duwan ee hybrid ee qajaarka hore waa tiro badan oo ah miraha in laga soo ururin karaa duurka muddo ah muddo dheer. Sidoo kale, ay duurka u adkeeyaa hooska xoog leh oo aad u xoog badan, iyada oo aan lumin karin karti ah fruiting. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sii korodho qajaarka Urban, xitaa on windowsill ah. Aad ayay u yartahay cudurada caadiga ah ee qajaarka.
Haddii aad raadinayso qajaarka is-iskudhisan ee balakoonka, ka dibna kala duwanaanshaha Debut waa in lagu daraa lambarkooda. Geedkaas waxaa lagu kala soocaa Bisaylkiisa hore ee Zelentsov, iyo sidoo kale dhalidda sare. Xitaa waa la kori karaa balakoonka xiran, windowsill ama in lagu koriyo. Waxaad ku beeran kartaa Maarso - Abriil, ka dib goosashada ka dib waxaad ku celin kartaa miraha beeraha bisha Luulyo, taas oo kuu oggolaan doonta inaad hesho dalag labaad dhamaadka bisha September. Xidigaha noocyada kala duwan waa mid dhexdhexaad ah, oo leh heer dhexdhexaad ah oo jeexdin ah caleemaha lateral. Waxay leedahay dhalid aad u sarreeya - ilaa 3.5 kg oo qajaarka ah oo ka kooban 1 mitir oo laba jibbaaran. degenaansho.
Midhaha ayaa leh astaamaha soo socda:
dhererka - 12-13 cm;
dhexroorka - qiyaastii 3.6 cm;
qaab - cylindrical;
dusha sare - tuberculate;
miisaanka - qiyaastii 70 g
Dhadhanka kala duwan ee Zelentsov waa mid aad u wacan, jidhku waa qallayl, oo aan qadhaadh lahayn. Isla mar ahaantaana, waxaa jira iska caabin u wanaagsan cudurrada kala duwan, laakiin tani waxay suurtagal tahay oo kaliya daryeel caafimaad oo wanaagsan ee duurka.
Waa muhiim! Inkastoo xaqiiqda ah in dhammaan noocyada qajaarka qandhada ku habboon koraan karaa balakoonka, waxay sidoo kale ku haboon beerashada furan iyo in lagu koriyo. Isla mar ahaantaana, markii ay sariiraha furan yihiin, waxay ku farxi doonaan xitaa dalagyo badan oo deeqsi ah.
Cucumber Zozulya marka koraya on balcony muujiyay tayo aad u wanaagsan. Faa'iidada ugu muhiimsan ee kala duwanaanshuhu waa wax-soosaarkooda sare, oo gaari kara 12 kg oo qajaarka ah oo ka kooban 1 mitir oo laba jibbaaran. aagga dhulka. Intaa waxaa dheer, miraha ay leeyihiin dhadhan fiican, iyo sidoo kale ku habboon ee pickling iyo pickling.
Qeybo kala duwan Zozulya waxaa loola jeedaa Bisaylkiisa hore, sida miraha ugu horreeya ee duurka u ururi karaa 48 maalmood ka dib soo baxa geedo. Midhaha miraha waxaa loo sameeyaa on cylindrical, iyada oo dusha sare u siman iyo midab madow mug. Inta badan qaabab yar oo muuqaal ah oo ka mid ah jilicsanaanta cad cad ayaa u muuqda dusha sare.
Waxaa ka mid ah sifooyinka kale ee sii kordhaya noocyo kala duwan, waxaa haboon in la xuso:
Cadaadiska sare ee cudurada waaweyn - fayraska qajaarka viral, askohitoza iyo spot olive. Xitaa iyada oo waraabiyo xad-dhaaf ah oo badan, duurka qajaar Zozulya ayaa daciif ah si loo sameeyo formation kallana xidid.
Wixii beerta qajaarka, waxaad isticmaali kartaa miraha qallalan ee qallalan, taas oo ay tahay, si kastaba ha ahaatee, waa in la googooyaa bakeeriga biyaha la kariyey. Dhowr maalmood ka dib, geedo baaluqan waxaa loo wareejiyaa dheriyada leh substrate ciid.
Xaaladaha heerkulka oo isweydaarsanaya. Waa mid aad u muhiim ah in ay duurka u ma ahan in ay hoos u dhigto heerkulka hawada hoos ku +12 ° C. Intaa waxaa dheer, for wax-soosaarkooda sare, waxaa fiican in ay ku koraan noocyo kala duwan on balakoonka si fiican u qorraxda qorraxda.
Ma taqaanaa? Qajaarada balakoonka ayaa sidoo kale ka ciyaari kara kaalinta qurxinta, gaar ahaan haddii ay leeyihiin iftiin ku filan si ay u koraan oo ay u sameeyaan duurka sare. Si kor loogu qaado saamaynta qurxinta, qajaarka waxaa lagu beeray sida midka ugu badan ee suurtogalka ah, caleemahana waxaa lagu xiraa si ay u taageeraan habka caleemaha loo abuuro derbi nool.
Kala duwan ee qajaarka hore u bislaaday ee balbaliga Elegant waa midka kaliya ee u baahan cayayaan ah cayayaanka ubaxyada. Si kastaba ha ahaatee, sanadihii la soo dhaafay, foomamka hybrid leh guryaha hantida parthenocarpic bilaabay inay ka muuqdaan suuqa, thanks to kaas oo qajaar this balakoonka bilaabay inuu soo saaro dhalidda sare xitaa iyada oo aan shinni. Laga bilaabo 1 jibbaaran. M beerashada qajaarka noocan oo kale ah ayaa ururin kara ilaa 7 kg dalagga.
Kareeraha kala duwan ee noocyada kala duwan waa midh, mid kasta oo ka mid ah waxay sameeyaan ilaa shan laamood. Midhaha ugu horeysa ee duurka waxaa la sameeyaa gudaha 44-60 maalmood. Zelentsy waxay ku kala duwan tahay qaabka Elielsoid iyo dherer yar - ilaa 13 cm Miro kasta oo miisaankiisu yahay 140 g. Midabkoodu waa cagaar mugdi ah, waxaa jira wax yar oo tubercles ah oo dusha sare ku yaal, laakiin waxaa jira dhufaysyo dheeri ah. Canab of Canab waxaa lagu kala duwan by jilicsanaanta, hilibka-dhadhanka-dhadhanka, kaas oo uusan lahayn hulla gudaha iyo ma dhadhamo qadhaadh. Miraha waxaa loo isticmaalaa labadaba qaab cusub iyo tan qasacadaysan. Dhibaatadooda keliya ayaa ah maqaarka cufan.
Ka mid ah faa'iidooyinka qajaarka kuwan waa caabbinta sare ee guuldarro cudurada kala duwan, iyo sidoo kale awood u leh inuu u dhaqmo sida pollinator ah noocyo kale oo qajaarka. Bushesku si firfircoon ayuu u kobcin karaa xitaa heerkulka hooseeya.
Qaar ka mid ah noocyo badan oo caan ah oo qajaarka ah ee beerista on balakoonka, taas oo ay kala soocaan meesha of ugxan si toos ah on ciridka ee baadiyaha. Isla mar ahaantaana, laamaha geedo daciif ah, laakiin laga bilaabo 2 illaa 6 ugxan-yaryar oo ku yaala meel kasta. Waxaa xusuus mudan in caleemaha lateral fruiting ka badan yihiin firfircoon ka mid ah bartamaha. Midhaha kala duwan ee kaadhadhka kala duwan ayaa lagu kala duwan yahay qaabka oval-daloolinta iyo dusha sare ee tuber-ah. Midabka iyaga oo leh cagaar culus, waxaa sidoo kale jira xargaha iftiinka dheer. Dhererka qajaarka la qallajiyey waa mid yar oo u dhaxeeya 10 cm, waxay miisaamaan wax ka badan 90 g. Zelentsy ee darajadan ayaa loo isticmaalaa in lagu cuno cusbo cusub iyo cusbada. Inta lagu jiro beerashada, waxay iska caabin adag u leedahay cuduro kala duwan. Marar dhif ah, waxa kaliya oo ay saameeyaan xagta oo caarad leh. Sidoo kale, ay duurka u ma dulqaadan isbedelka deg deg ah heerkulka.
Waa muhiim! Markaad qajaarka ku korodho balakoonka, ha iloobin in ay duurka u yihiin kuwo aan xasillooneyn oo ay ku dhaawacmi karaan dabayl xoog leh. Sidaa daraadeed, horay, u fakir taageerada iyaga oo ha ilaawin inaad xidhxid kasta oo baxsiga.
Hummingbird F1 qajaarka waa nooca kornishonnuyu oo leh mid aad u ballaaran. Mid kasta oo ka mid ah baadiyaha of cultivar this qajaarka laga bilaabo 2 illaa 10 ugxan-yaryar ayaa la sameeyey, oo cagaarka yar ayaa dib loo sameeyay.
Tilmaamaha Hummingbird miraha waa sida soo socota:
dusha sare ee qajaarku waa buro, oo leh cadaan yar oo midab cad;
midabku waa cagaar madow, laakiin dusha sare ee miro kasta waxaa ku jira xayawaan joogto ah;
xajmiga caleemaha cagaaran waa mid yar, dhererkoodu wuxuu ku kala duwanaan karaa 5 ilaa 8 cm;
Qajaaradu waxay miisaankoodu ka noqon karaa 60 illaa 80 g;
qaab Zelentsi waa mashiinka-qaabeeya noocyo kala duwan oo dabiici ah;
Miraha qajaarka qajaarka Hummingbird waxaa inta badan loo isticmaalaa salting, inkastoo ay ku habboon yihiin isticmaalka cusub.
In beerista, noocyo kala duwan oo aan qabyo ahayn, waxay ku kori kartaa xitaa in penumbra, si kastaba ha ahaatee, waxay muujinaysaa natiijooyinka dhalidda sare marka laga soo dhaadhaco balakoonka si fiican loo shiday ama windowsill. Adkeysiga cudurada qajaarka badankood, waxyeellada cayayaanka lama arko.
Ma taqaanaa? Dhiroonka qajaarku waa dhir qoyan oo qoyan. Cabbitaanka ku filan ee duurka waxay keeni kartaa oo kaliya in ay koritaanka saboolka ah, laakiin sidoo kale muuqaalka dhadhan qadhaadh ee midhaha.
Qajaar Makhaon waa kuwa ugu caansan ee ka mid ah noocyada ku habboon ee sii kordhaya on balakoonka. Geedka hybrid waxa uu leeyahay dhammaan sifooyinka lagama maarmaanka ah ee habka la mid ah beerashada, waxaa kale oo uu leeyahay dhalid sare.
Kala duwanaanshaha Machaon waxaa lagu gartaa baadiyaha weyn ee leh caleemaha dhinaca badan, meel kasta oo laga helo 2 ilaa 11 ugxan-yaryar. Laga soo bilaabo ugxan-sidahan, halkii ay ka soo jeedaan hababka milixda ayaa la sameeyaa. Waxay ku kala duwan yihiin dusha buluug ah oo lagu daboolay maqaayad cad, iyo sidoo kale joogitaanka cirbadaha iftiinka dheer ee dusha oo dhan. Dhererka miro celcelis ahaan u dhaxeeya 7 ilaa 11 cm, iyo miisaanka - laga bilaabo 60 ilaa 110 g. Waxay xajin karaan cabirkooda mudo dheer, xitaa joogista baadiyaha muddo dheer.
Miraha ka mid ah noocyada kala duwan ee qajaar waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan - saladh cusub, pickling iyo halsano. Wax soo saarka kala duwan ee ku dhowaad mar walba sarreeya, maadaama ay si weyn u koraan xitaa qayb ahaan qayb ahaan, iyo cudurada qajaar ku dhowaad ma saameynayaan duurka.
Sida adiguba aad arki kartid, xitaa balakoonka oo leh meel bannaan oo aad u iftiimiso iftiinka saboolka ah waxaad heli kartaa dalag qurux badan oo qajaarka ah. Isla mar ahaantaana, badan oo ka mid ah noocyada kor ku xusan waxaa la kori karaa xitaa daaqadaha, taas oo, markaad isticmaalayso ilo kale oo iftiin leh, waxay soo saari doonaan qajaarka cusub sannadka oo dhan.